Savory na Thyme: Olee otú osisi si dị iche? - Thyme - 2020
Kedu ihe dị iche n'etiti thyme na thyme, ọdịdị na ọdịiche nke osisi
N'ihi nkwenye nke aha, ọtụtụ ndị kwere na savory na thyme - otu osisi a. Ka anyi gbalịa inyocha ihe ndi ozo di iche iche ma mata ihe di iche. A sị ka e kwuwe, ndị na-elekọta ubi adịghị enwe ike ịchọta otu echiche ogologo oge - savory na thyme ma ọ bụ thyme bụ otu ma ọ bụ osisi dị iche iche. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha osisi ndị a ma chọpụta otú savory si dị iche na thyme.
Nkọwa na ụdị nke thyme
Savory na Thyme: gini bu ihe di iche
Kedu ihe bụ ihe nchekwa?
Savory - osisi ohia kwa afo, iru 40-50 cm n'ogo. Okpokoro ahụ bụ ogologo, dịtụ aka, 15-45 cm n'ogologo. Oghere nke agba ntụ-acha akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ nke ụdị nke linear ma ọ bụ linear-lanceolate, ogologo ihe dịka 15-25 mm. Obere okooko osisi nke acha ọcha, odo odo na agba aja aja na agba odo odo na-adị n'ime axillary verticils. Savory blooms site na July ruo August, ke September mkpụrụ ripen - agba aja aja. Savory nwere aha ọzọ - ose ahịhịa.
Ọ dị mkpa! A na-eme ihe na-ekpo ihe ọkụkụ nke savory mgbe njedebe nke okooko, a na-emekwa gịme tupu oge.
Ihe omume nke ihe ndi ozo bu ihe nnu nke mmanu, mmanu di mkpa, thymol, cyneol, carvacrol, dipentene, cymol, boreol, carotene, phytoncids, vitamin C, magnesium, phosphorus, calcium, potassium, selenium, zinc, resins na tannins. Ala nke nri ala nke Mediterranean bụ nke dị na Mediterranean na narị afọ nke itoolu ka a na-emefu ihe oriri. Ugbu a, a na-ejikarị nri ndị na-eto eto na-eme nri, n'ihi na ha na-enye efere nke akwụkwọ nri, azụ, cheese na mmiri na-emepụta ihe ngosi pụrụ iche.
Nri ndi ocha di nma na anu anu oke, anu ulo na anu anu. Ụlọ ihe ịchọ mma na-eji mmanụ dị mkpa n'imepụta ngwaahịa ya.
Maka ọgwụgwọ savory ka eji nweta nsonaazụ dịka antiseptic, diaphoretic, analgesic, tonic, diuretic, astringent, antispasmodic na expectorant utịp. Ihe ntanye ego na-enye aka igbochi ikpuru, kpochapụ nsị, meziwanye ọbara, kpochapụ akụrụ na imeju, normalize sugar in diabetes, help with heart disease and tachycardia.
Thyme (shrub) - ọ dị elu ruo 30 cm n'ogologo, ọtụtụ ọkwá osisi na-eguzo ma ọ bụ na-agha ụgha. A na-ahazi obere akwụkwọ petiolate nke elongated oval udi na vex veins na-emegide. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge okpomọkụ niile na-acha ọcha ma ọ bụ odo odo-pink hue, nke na-etolite elongated inflorescence.
Ka ọ na-erule Septemba, mkpụrụ osisi ahụ chara acha n'ụdị igbe, nke nwere bọọlụ anọ anọ. E ji ha mee ihe dị ilu na nri. Ogige thyme bụ ụdị perennial thyme na-acha ọcha okooko osisi, ubé obere, ya ísì bụ kpochapụwo senti nke thyme.
Ihe mejupụtara nke osisi ahụ: thyme mejupụtara mmanụ ndị dị mkpa, vitamin C, flavonoids, carotene, magnesium, calcium, potassium, tannins na ihe ndị dị ilu, organic acid, saponins na biologically active substances thymol, borneol na cymoleum.
A na-eji ogwu ahịhịa gị mee ka ọ dị ka ihe si esi na anụ, azụ na ụzọ mbụ, mgbe ịchekwa akwụkwọ nri na ịme tii. Nmekere nke thyme eji mee ihe dị ka anticonvulsant, antibacterial, analgesic, anti-inflammatory, astringent, expectorant, choleretic, diuretic, ogwu ogwu, anthelmintic na ọnya agwọ ọgwụgwọ.
Ị ma? Thyme na savory nwere mmetụta bactericidal nke ọma.
Na mkpokọta, e nwere ihe karịrị 150 ụdị thyme. Kasị ewu ewu:
emekarị ka ị na-eto eto dị ka cm 15, nke dị n'okpuru obere akwụkwọ dị na pubescent, okooko osisi na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha odo odo. Ụdị dịgasị iche nke thyme - lemon, akwụkwọ ndị na-eto eto nwere ncha acha, n'oge na-aga, agbanwe agba na-acha akwụkwọ ndụ. A na-ahụ osisi na-ekpo ọkụ ọkụ site na ísì ísì ísì ụtọ nke lemon. Ubi dị ka Elfin dịgasị iche iche, nke ịdị elu ya dị elu ruo 5 cm, osisi ahụ yikwara ka ígwé ojii buru ibu nke nwere sentimita 15 cm.
akpụ akpụ gị - perennial ruo 15 cm ogologo, na-ahọrọ a dịtụ alkaline, ụwa kwesịrị ekwesị na-edozi ahụ. Ibu nke ụdị thyme na-akpụ akpụ, Ome nwere pubescence, epupụta bụ lancet-dị ka 10 mm ogologo, obere okooko osisi nke na-acha ọcha na pink agba ụdị capitate inflorescence. Osimiri na-eme na ọkara nke abụọ nke oge okpomọkụ. Ọ bụ thyme na-akpụ akpụ ma mara dị ka thyme.
Bogorodsky Cemko - ihe dị iche iche nke dị iche iche na-akpụ akpụ, nke nwere ike ịmalite, akwụkwọ ndị ahụ bụ isi awọ-akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nwere uto ilu ma na-egbuke egbuke, pink ma ọ bụ okooko osisi odo odo.
egwurugwu - osisi dị elu ruo 25 cm, na-eguzo Ome, na-acha akwụkwọ ndụ-akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na otu oge ntoju, obere okooko osisi na-acha odo odo-pink ndo mere ndokwa n'ìgwè dị na axils nke akwụkwọ.
Ọ dị mkpa! Dị ka ihe na-esi nri, a na-etinye thyme na efere na mmalite nke nri, na nri - nkeji ole na ole ruo mgbe esiri ya.
Mgbe ụfọdụ ajụjụ na - ebili: kedu ka thyme si dị iche na thyme? Ndị ọrụ ubi na ndị na-agwọ ọrịa ọdịnala nwere echiche zuru ezu na thyme na thyme bụ otu osisi. A na-akpụ akpụ thyme dịgasị iche iche bụ thyme. A kwenyere Thyme na thyme dị ka ndị mara mma - ọdịdị gị nwere mkpịsị ụkwụ na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke na mgbọrọgwụ ogologo oge, na thyme nwere okpueze sara mbara, nke na-adaba nwayọọ nwayọọ na usoro mgbọrọgwụ ndị ọzọ. Esemokwu dị iche iche adịghị emetụta uru bara uru nke osisi, n'ihi na a na-amata ha mgbe mgbe.
Savory na Thyme - Ndị a bụ osisi nke ụlọ Labiaceae, akụkụ ala nke nwere nnukwu mmanụ dị oké mkpa ma chọpụta ezigbo ihe maka ọgwụ ọgwụ na dị ka oseose seasonings na efere dị iche iche. Ka anyi gbalịa ichota osisi savory na thyme na ihe di iche n'etiti ha.
Iji malite, a ga-ekwuru na savory na thyme nwere ihe dị iche na aha aha: savory bụ kondari ma ọ bụ satiri, na thyme bụ thyme. N'anya, osisi ndị a dị iche iche, ihe nchekwa dị ogologo ma na-etolite n'ụdị ohia, thyme bụ osisi na-eto eto, nke mara mma, nke na-agbasa n'ala, kpuchie ya na tepe. Na mgbakwunye, osisi nwere ụdị dị iche iche nke akwụkwọ na okooko osisi. Ihe ísì ụtọ ahụ bụ oseose na balsamic bara ọgaranya, thyme nwere ihe ọkụkụ ọhụrụ nke osisi osere.
Ị ma? Akwukwo akwukwo nke ihe ndi ozo nwere ike igbochi ya na ihe mgbu mgbe aru ogwu na ibelata onu.
Ebe si thyme na savory dị iche: A na-eji Thyme mee ihe n'Ijipt oge ochie maka ndị na-achịkọta ndị isi, ndị bi na Gris oge ochie na-eji ihe oriri eme ihe oriri.. Thyme na ihe dị mma n'ihi na ha na-eto eto ma na-arahụ n'ala na-eji mkpuchi mara mma na-eji ya emepụta mkpụrụ osisi, alpine slides and paths. Na-eto eto ndị a bara uru na azụ ụlọ gị, ị ga-enweta oge dị mma maka efere dị iche iche, nakwa ihe ndị dị mkpa na-agwọ ọrịa na-enyere aka na ọrịa.